Baqeqeshe abasebenza ezindlini | News24
Baqeqeshe abasebenza ezindlini
Izithombe: Zithunyelwe Umsebenzi wakwa-Hirschs uNks Ayanda Nkabinde, uMnuz Naas Mpisi noNks Gift Phakathi.
ABAKWA Hirsch’s e-Hillcrest baqeqeshe abasebenzi base zindlini bebambisene nabakwa-Samsung nabakwa-Defy.
Okhulumela abakwa-Hirsch’s uNks Taryn Taylor uthe laba besimame baqeqeshwe ngokunakekelwa kwama-fridge, i-washing machine, i-microwave ne-pressure cooker.
Uthe: “Bathole nokuqeqeshelwa i-pressure cooker entsha ekhiqizwe ngabakwa-Defy beqeqeshwa uNks Gift Pikati. Sihalisela uMnuz Naas Mpisi owine umncintiswano wokuba umsebenzi oqavile kule nyanga kaMbasa (April). UNks Anthea Fisher okumphathi kaMnuz Naas uthe uNaas wayesebenza engadini yakhe futhi wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Konke akwenzayo ukwenza ngothando nesineke. Ngiyamhalalisela ngale ndondo.”
Umcimbi wokuqeqesha abasebenzi uzoba ngomhla ka-4 kuNhlaba (May) kwa Hirsch’s e-Hillcrest ngo-9 ekuseni. Uma uthanda ukwazi kabanzi shayela inombolo ethi:031 761 7500 noma uthumele ngekheli le email elithi: tarynt@hirschs.co.za.